ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ တာဝန်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- Free :
လူတို့သည် မိမိကို မကောင်းပြောလျင် မခံနိုင် ဆဲလျင်မကြိုက် ''အသံဖြင့် ပြောသည်နှင့်'လက်ဖြင့်လုပ်လိုက်ခြင်း' မြို့နေလူ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် တစ်ဦးဆီက ပိုက်ဆံ တစ်ဦးကယူ၍ အသက်မွေးကြ၏ ''တော၌ ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူ၍ လှည့်လှယ်စားကြ၏ ''တောကလူကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရန် မလွယ်ကူသော်လည်း မြိုက လူကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရန် လွယ်တယ်ဆိုတာ လောကသားများ သတိထားမိသလား
Jan 27, 2016 04:53 AM
ရေးချင်သလိုရေး ဆဲချင်သလိုဆဲ ဖွင့်ပေးထားလိုက်စမ်းပါ ဒါမှ လောကသားတွေ အကြောင်း သိရမယ်
Jun 06, 2015 04:18 AM
ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဆိုပြီး လက်လုပ်လက်စားများ ထံမှ ငွေကောက်ခံ၍ အသံချဲ့စက်ဖွင့်ကာ နာမည်ကောင်းယူတတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာပြည်တွင်ရှိကြောင်း ထောက်ခံပါသည် မပြေလည်၍ မပါဝင်နိုင်လျင် ယုတ်ညံ့သော တုန့်ပြန်မှုများ နှင့် လူရာမသွင်းကြောင်း ထောက်ခံအပ်ပါသည်
May 14, 2015 10:23 PM
thin thin နေရပ်- mawlamyine :
Apr 12, 2013 10:42 PM
ye နေရပ်- ygn :
ရန်ကုန်လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၇ရပ်ကွက် တေးဥယျာဉ် ၁
လမ်းမှာ လက်လုပ်လက်စားများထံမှ မိသားစုတစ်စုလျှင်
ဖို့ အတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေတာကို ထုတ်လွှင့်ပေးစေချင်ပါတယ် ။ အီးမေးလ်ပေးပို့ထား
Nov 29, 2012 09:23 AM
jeeth bahadur နေရပ်- myitkyina :
i want to know about gurkha myanmar (nepali )news , when i was young i never listen about goukha myanmar , how to live in myanmar, pls you inform to us
Nov 29, 2012 04:27 AM
Oct 15, 2012 09:21 PM
ကိုလမ်းပြ နေရပ်- အောင်ချမ်းသာ :
Sep 17, 2012 09:48 AM
Apr 01, 2012 08:12 PM
rfaရေကျေးဇူးပြုပြီးတိရစ္ဆာန်နဲ.သစ်ပင်လေးတွေကိုကယ်တင်ပေးပါနော်။လိပ်စာကစောစံဖိုးသင်။ပါ.၀ကvoaဖုံးနံပတ်12023825554ပါ။rfaအိုဆူအိုခလေးနော်။၀ါကညောကလော်ယှဲတဲသေး။၀ါကညောလီဝါရေးတတေးပါ။ခဲနယ်အီ ယဲအီးမေးနဲ.ပါစ်ဝ ဘ၀ါသီညားဟိုးသ ဒလုံခြုံပါ။I need RFA HELP.သားအီးမေးနဲ.ပ၀ကိုrfa ကိုအပ်ပါတယ်။gtalkက sawksoe854 ပ၀က095401604ပါ။သားရဲဖေ.ဘွတ်ကိုပါ.၀ပြောင်းပေးပါနော်။ဒါပလုနော်။thank
Feb 19, 2012 05:27 AM
You changed the font on Burmese pages to Burmese Unicode font that truly and fully complies to Unicode encoding ver 6.0.
Why you stop using stolen-material Zawgyi font, abused -Unicode font, abused-US Tax-payers font ?
Are you getting out of morally-reprehensible status ?
Getting to moral upright is hard for you.
Feb 15, 2011 05:49 PM
Feb 02, 2011 10:54 AM
နှေဦး နေရပ်- သထုံမွို့ :